Somaliland: Wasiiro Magaalada Addis Ababa kula kulmay Madaxweynihii hore ee Nigeria - Somaliland Post
Home News Somaliland: Wasiiro Magaalada Addis Ababa kula kulmay Madaxweynihii hore ee Nigeria
Somaliland: Wasiiro Magaalada Addis Ababa kula kulmay Madaxweynihii hore ee Nigeria
Addis Ababa (SLpost)- Wefti Dawladda Somaliland uga qayb-galaya wada-hadallada dhowaan u furmaya Dawladda Somaliya oo shalay u amba-baxay magaalada Addis Ababa oo ay ku sugan yihiin, ayaa kulan la yeeshay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasango, waxaanay xubnaha weftigu warbixin ka siiyeen xaaladda dalka iyo siyaasadda mandaqadda Geeska Afrika.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Afhayeenka madaxtooyada Axmed Saleebaan Dhuxul, kaas oo u qornaa sidan: “Weftiga Jamhuuriyada Somaliland uga qayb-galayey wada hadalada dalka Somaliya oo ku sugan magaalada Addis-ababa xarunta dalka Ethiopia, oo maalmaha soo aaddan u amba bixi-doona dalka Turkiga, ayaa maanta magaalada Adis- ababa kulan, kula yeeshay madaxwaynihii hore ee dalka Nigeria Obasango.
Waftigan oo uu hogaaminayay wasiirka Arrimaha debadda Somaliland, Mudane, Maxamed Biixi Yoonis, waxa kulankaasi ku wehelinayay wasiirka madaxtooyada Mudane, Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana madaxweynihii hore ee dalka Nigeria uga xog warameen marxaladihii kala duwanaa ay Somaliland soo martay nabadaytii beelaha, dhismaha dowladnim iyo sababihii keenay in qarinameeda dib-u-lasoo noqoto Jamhuuriyada Somailand.
Waftiga waxay sharaxaad mug leh ay ka siiyeen madaxwaynihii hore ee dalka Nigeria Obasango, guud bahaanba xaalada jamhuuriyada Somailand. Heerarkii nabadgalyo, dhismaha dowladnimo iyo dimoqraadi yada Somaliland ay ku talaabsatay oo ku dhisan dhidibo adag oo qawaaniin iyo sharci distoori ah ku qotanta.
Waxa kaloo intaas ay ugu dareen xog waranka ay siiyeen madaxwaynihii hore ee dalka Nigeria Obasango. In Somaliland kaalin nabad-galyo oo muhiin ah kaga jirto gobolka geeska Afrika, oo dhibatooyin badan oo soo jiitamay oo mahadhi waaya ka jireen mudo dheer.
Madaxwaynihii hore ee dalka Nigeria Mr. Obasango. oo horeba xog buuxda uga haystay xaalada Somaliland, waxa uu ku amaanay dowlada iyo shacabka Somaliland horumarka ay gaadhay iyo talaabooyinka ay qaaday oo mudan iyo kuwo u noqonkara tusaale wanaagsan oo inay ku daydaan ay tahay wadamo badan oo ictiraaf haysta, waxaanu xusay Mr. Obasango. Muhiiimada iyo sida loogu baahan yahay in beesha caalamku barbar istaagto dadaalka ay wado dowlada Somaliland ee uu hogaaminayo Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Kulankan oo ahaa mid qiimo gaara u leh labada dhinacba ayaa ku soo gabagaboobay jawi wanaagsan.”